အင်တာနက်ကို E - mail ပို့ရုံ၊ Chat လုပ်ရုံပဲလို့သာ သင်ထင်နေသလား ~ The ICT.com.mm Blog
အသုံး၀င်မှု အပိုင်းကပြောရင် ကမ္ဘာ တစ်၀ှမ်းက လူသန်းပေါင်း (၁၄၀၀)ကျော် ပါ၀င်နေတဲ့ မြို့တော်ကြီးတစ်ခုလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က လူ သန်းပေါင်း (၇၅၀၀)ကျော်ရဲ့ ၆ပုံ ၁ပုံက ဒီနေ့ခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်ကတစ်ဆင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်၊ ရောင်း၀ယ် ဖောက်ကားနေကြပါတယ်။ စာမတတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူ၊ နား၊ မျက်စိအလင်း မရသူများတောင်မှ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုလာနိုင်ပြီလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။လူသန်းပေါင်းများစွာ အသုံးပြုတဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ အသုံးပြုခကလည်း သာမန် ဆင်းရဲသူများပါ သုံးလာနိုင်အောင် ဈေးနှုန်း သက်သာလာတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုဟာလည်းတစ်နေ့တခြား တိုးတက် များပြားလာခဲ့ပါတယ်။
လူကြီး လူငယ်မရွေး အင်တာနက်ကြီးကို ပါးစပ်ဖျားက မချ၊ လက်က ကိုင်လာနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ တန်ခိုးအရှိန်ဟာ ကြီးမား လာနေပါပြီ။ အင်တာနက်ကို ကမ္ဘာ တစ်၀ှမ်းက ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနေတဲ့ နှုန်းထားဟာဆိုရင်ဖြင့် တစ်နာရီထက် တစ်နာရီ ပိုပြီး တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို တစ်ထိုင်တည်း၊ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ရှာဖွေ ပေးနိုင်ပြီး လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းနဲ့ ဆက်သွယ် ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အင်တာနက် သုံးတဲ့အခါ ဘာတွေ သိထားရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အချက်အလက် ရှာဖွေခြင်းနှင့် အချက်အလက် ရှာဖွေပေးသူများအင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့အခါ သိထားရမှာက ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေ ဘယ်နေရာကနေ ရှာလို့ရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အင်တာနက် ပေါ်ကို အစိုးရတွေက အစပြုလို့ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေ၊ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင် စီးပွားရေးသမားတွေ၊ အလယ်သာမန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအဆုံး အချိန်နဲ့အမျှ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်း အရာတွေကို တင်လေ့ ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်အပေါ်ကို သူတို့ရဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ သူတို့သိတဲ့ အချက်တွေကို တင်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီ အချက်တွေကို အခြားသူတွေ သိမယ်၊ သူ့အလုပ်ကို နိုင်ငံတစ်၀န်းက လူတွေ ပို သိလာမယ်။ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သိပြိး ပိုမို အောင်မြင်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းအားဖြင့် မိမိသိတဲ့အချက်ဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့ ကဗျာ ဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုပဲ ဖြစ်စေ လူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေ တင်လာကြတဲ့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ အချက်အလက်တွေဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမိုပြီး များပြားလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ယနေ့လူတွေဟာ လိုအပ်တဲ့ အချက်မှန်သမျှကို အင်တာနက်ကနေ ရှာကြတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုကို ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လက်ခံ လာရတော့တာပါပဲ။ ခုဆို ကြည့်လိုက်ပါဦး။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်တောင် ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ ဖန်တီး လာခဲ့ ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ခုတစ်လော အားလုံးလည်း သိကြတဲ့ ဦးပဉ္စင်း ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ အသိ – သတိ ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်လည်း လွှင့်တင်လို့ လာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ထက်ထိ အင်တာနက်လောက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို တစ်ထိုင်တည်း၊ တစ်နေရာတည်းကနေ ရယူနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာ လူ့သမိုင်းမှာ မပေါ်ဖူးသေးပါဘူး။ တစ်ဖက်က ကြည့်ရင်လည်း အချက်အလက်တွေ စုံလာသလို၊ မလိုအပ်တဲ့ အချက်အလက် တွေလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ အများကြီး ရှိလာပါတယ်။ လူတွေဟာ ကောင်းတာတွေကို တင်ကြသလို၊ မလိုအပ်တာတွေကိုလည်း တင်ချင် တင်မိကြပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာတွေကိုလည်း တင်လို့ ရလို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ အင်တာနက်ပေါ်က အချက်တွေရဲ့ ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာဟာ လူတွေရဲ့ ကောင်းတာ ဆိုးတာနဲ့ပဲ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အင်တာနက် သုံးမယ့် သူတစ်ဦးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကို ခန့်မှန်းလို့ ရပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
သန်းနဲ့ချီပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိသလို၊ သန်းနဲ့ချီပြီး အသုံးမ၀င်တဲ့ အမှိုက်တွေလည်း ရှိတဲ့ အင်တာနက်ကို သုံးတဲ့အခါ ကိုယ်လိုတဲ့အချက်ကို ဒက်ထိ ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အရေးကြီးသွားပါပြီ။ ဒါဟာ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတိုင်း သိရှိနားလည်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အင်း… ပြောရရင် ဒီလိုကိစ္စဟာ အင်တာနက်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ကွက် ထဲက ဗီဒီယိုခွေဆိုင်မှာ သွားငှား ရင်တောင်မှ ခွေတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာတာထက် ခွေဆိုင်က ငှားပေးတဲ့သူကို မေးလိုက်တာက ပိုပြီး မြန်ဆန် ထိရောက်မှု ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ခွေဆိုင်က လူက လာသမျှ လူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်း အပေါ် အမြင်တွေကို မေးမြန်းမယ်၊ ငှားသူတွေ မရှိရင် ဆိုင်ထဲက ခွေတွေကို ကြည့်နေ၊ စီနေမယ်။ ကြာတော့ သူ့ ၀န်းကျင်မှာ ကျွမ်းကျင်လာပြီပေါ့။
ဒီတော့ ခွေငှားတဲ့သူလာတော့ သူ့အနေနဲ့ အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးလာနိုင်တာပေါ့။ ဒီလိုပဲ အင်တာနက်ထဲမှာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ အချက်တွေထဲက ကိုယ် လိုချင်တာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် လိုက်ရှာတဲ့အခါ ဘယ်အကြောင်းအရာက ဘယ် Websiteမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သိဖို့ရာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အသစ် အသစ် တိုးလာတဲ့ Websiteတွေကလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက်များပြား လာနေပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ် ရှာချင်တာကို သိနေတယ်။ ဥပမာ – အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ သိချင်တယ် ဆိုပါတော့။ ဒီအခါ အင်တာနက်ထဲမှာ ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေ၊ Websiteတွေ အများကြီးရှိတယ်။
သူတို့ကို Search Engineတွေလို့ ခေါ်တယ်။ ယခု လောလောဆယ် Search Engine တွေထဲမှာ နာမည်ရနေတာက Googleနဲ့ Yahooတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက် သုံးမယ့်သူတွေဟာ Search Engineတွေဖြစ်တဲ့ www.google.com နဲ့ www.yahoo.com တို့ကို သုံးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စာ တစ်ခုကိုတော့ အနည်းအကျဉ်း အဓိပ္ပာယ် သိထားရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်၊ အာရှတိုက်က အင်တာနက် သုံးတဲ့သူတွေအားလုံး အင်္ဂလိပ်စာ အများကြီး မတတ်ပေမယ့် အင်တာနက် ပေါ်မှာ လိုချင်တဲ့ အချက်တွေကို ရှာနေကြတယ် မဟုတ်လား? တဖြည်းဖြည်း အင်တာနက် သုံးရင်းနဲ့ပဲ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း တစ်ဖက် တစ်လမ်းကနေ ပိုတိုးတက်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိလာနေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အီးမေးလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုနေရာမှာ အသုံးပြုသလဲ ဆိုတာလည်း လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
အင်တာနက် အီးမေလ်းများ ……….
အီးမေးလ်ဆိုတာ ဘာလဲ? စာတိုက်ကို အသုံးပြုပြီး တစ်နေရာက တစ်နေရာကို စာပို့သလိုမျိုး အင်တာနက် ပေါ်မှာ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စာပို့တဲ့ စနစ်ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ အီလက် ထရောနစ် မေးလ် (သို့) အီးမေးလ်လို့ သုံးနှုန်းထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီနော်။ ကဲ ဒါဆိုရင် အပြင်မေးလ်နဲ့ အီးမေးလ် ဘာကွာခြားသလဲလို့ မေးစရာ ရှိလာပါပြီ။ အပြင် မေးလ်နဲ့ အီးမေးလ် ကွာတာက အပြင်မေးလ်က တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမယ်၊ ရက်အတန်ကြာမှ ရောက်မယ်။ လူအများကို ပို့ရင် မိတ္တူ အများကြီး ကူးရမယ်။ စာတိုက်ပုံး ရှိတဲ့ နေရာ သွားရမယ်။ စာအိတ်ကုန်မယ်။ စာရွက် ကုန်မယ်။ ကဲ ဒီတော့ အီးမေးလ်ကို ကြည့်ရအောင်။
အင်တာနက် အီးမေးလ်က အင်တာနက်ရှိရင် ရပြီ။ နောက်တစ်ချက် အားသာချက်က အခုပို့ အခု ရောက်တယ်။ တံဆိပ်ခေါင်း မလိုဘူး။ လူအများဆီကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပို့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ် အသုံးပြုမယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်တာနက် ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အင်တာနက် သုံးဖို့အတွက် လူတိုင်း မရှိမဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့က အီးမေးလ် တစ်ခုတော့ မဖြစ်မနေ ရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ လိုချင်တာတွေ မေးလ်ကနေ တစ်ဆင့် ရနိုင်သလို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချိတ်ဆက်ရ လွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်တဲ့ အီးမေးလ်တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
အင်တာနက် အီးမေးလ်တွေဟာ ယနေ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို များစွာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားတိုင်း အခမဲ့၊ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် တခြားကမ္ဘာက အကြောင်းအချက်တွေဟာ အခြားတစ်ဖက်ကို ချက်ချင်းလိုပဲ စီးဆင်း နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့သတင်းနဲ့ ဗဟုသုတ ရေချိန်ဟာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ အကွာအဟ နည်းသွားပါပြီဆိုတာ ဒီအီးမေးလ် တွေကြောင့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အခု နောက်ပိုင်း လူအများ စိတ်၀င်စားနေတဲ့ မိုးလေ၀သ သတင်းတွေကိုလည်း အချိန်တို အတွင်းမှာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေ အချိန်မီ သိရှိလာတဲ့အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများလည်း လုပ်ဆောင် လာနိုင်ပါပြီ။
ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့ကြီးကြီးတွေဟာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရွှေ့နိုင်၊ ပြောင်းနိုင် ဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဟာ ဒီအီးမေးလ် တွေကြောင့်ပါပဲ။ ကဲ ဒီတော့ အင်တာနက် ပေါ်မှာ ဘာတွေလိုချင်သလဲ၊ ဘာတွေ ယူပြီး ဘာတွေပယ်ရမလဲဆိုတာ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ရည်ရွယ်ရင်း အင်တာနက်ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှား ခြေဆန့် နိုင်စေဖို့ ရေးသား တင်ပြလိုက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Newer ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ထဲတွင် Data Center ကို စတင်တည်ထောင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဟု သိရ
Older မြန်မာမီနီဆလွန်းကားများကို လက်ငင်း ငွေချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မြင့်တက်လာနိုင်
Featured, News, Newsroom, Opinion, Web
Work from home နဲ့ သိမှတ်သလောက် နည်းပညာများ
ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ Work from Home ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို နေရာတိုင်း ကြားသိနေရမှာပါ။ ဒီစကားလုံးက အခုမှ စတာ မဟု...
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိရှိ အများက လက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့ Email ရေးသားနည်းအချက် (၇) ချက်
ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုနဲ့ ကုမ္ပဏီအများစုရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနတွေက စာရေးသူကို သူတို့အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက်အများက ယုံ ကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ Emailကို ဘ...
MPT မှ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက် သုံးစွဲမှုကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း အသုံးပြုမှ ပေးရမည်ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လ...